Agaasimaha wasaaradda Arimaha gudaha oo Lugu Eedayey in uu Musuqmaasuqey Mucaawino Loo Wadey Degmadda Qoryooley. – idalenews.com
Wararka Hadda Naga soo gaarayo Gobolka Shabellaha Hoose, ayaaa sheegayaan in macaawino loo wadey degmadda Qoryooley, oo la doonayey in loo qiibiyo dadka ku dhibaateysan degmadaasi, la musuq maamusqey.
Sarkaal ka tirsan, maaamulka gobolka shelleeha hoose ayaa U sheegey saakey Shabkadda Idale News Online. in tirada baarbuurta guud ee loo direy Degmadaasi ,islamarkaana siday macaawinada ay gaarayeen 10 gaari. wararku waxa intaasi ku darayaan oo aan sarkaalkan macagiisu qarey aan ka soo xiganey in Agaasimaha guud ee Wasaaradda arimaha Gudaha mudane, Cali saciid abtidoon xalane uu la Harey labo gaari oo macaawino ah waa sida uu sheegey sarkaalka ka tirsan maamulka Gobolka shabeellaaha Hoose.
Sarkaalkan oo hadalkiisu sii wato ayaa waxa uu xaqiijiyey in xildhabaanadda ka soojeedaan Degmada Qoryooley Ee beelaha Garre iyo Jiido ay ogyihiin arintaasi., waxaana xusey in macaawinadan lagu soo qaadey macaga Beesha DM.
Si kastaba ha ahaatee, waxa soomaaliya lagu tiriyaa ama ay ka mid yahay wadamada dunidaa ugu musuqmaasuqa badan. marar badan ayaa wasaaradda arimaha gudahha soomaaliya lagu eedeyey wax daba marin iyo arimo kale.
Ugu dambeyntii arinti waxay ku soo beegmaysa xilli Dhawaan degmadda qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose ,lagu soo sheegey xaalado bini aaddamimo u baahan wax ka qabasho, ka dib markii halkaasi laga saarey kooxda alshabab ee soomaaliya, isla markaana gacan gashey Ciidamadda dowladda soomaaliya.